Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Argentina Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza iNdaba ye-Football Genius eyaziwa ngegama elithi "U-El Pachu“. Kungumfanekiso ophelele wePapu Gomez Childhood Indaba, i-Biography, amaqiniso womndeni, abazali, impilo yakuqala, neminye imicimbi ephambili kusukela ezinsukwini zakhe zokuqala kuze kube lapho ethandwa khona.
Impilo kanye nokuvuka kwePapu Gomez. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumholi omkhulu kwabaphethe ubuciko futhi onamandla. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu yePapu Gomez's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
Ukuqala, abazali bakaPapu Gomez babenaye on Usuku lwe-15 kuFebhuwari 1988 wamnika amagama U-Alejandro Darío Gómez. Igama elithi "UPapu Gomez"Yisiteketiso nje. Umsunguli webhola owayenetalente wazalelwa edolobheni laseBuenos Aires, eArgentina kubazali okuncane okwaziwayo ngaye ngesikhathi sokubhala le bio. Ngezansi kunesithombe sabazali bakaPapu Gomez- ubaba wakhe obukeka efana naye nomama omuhle.
Hlangana Nabazali bakaPapu Gomez. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
UGomez ungumuntu wase-Italy-wase-Argentina onobuzwe obuxubile nemvelaphi yomndeni waseNingizimu Melika. Wakhulela e-Avellaneda edolobheni lakhe lokuzalwa - iBuenos Aries - lapho akhulela khona kanye nodadewabo uMonica. Ukukhula kwisizinda semindeni esezingeni eliphakathi e-Avellaneda eBuenos Aries, uGomez osemncane wayehlala futhi ephefumula ibhola phakathi neminyaka yakhe yokwakha. Indlu yomndeni kaGomez osemusha yayingekude nezinkundla zamakilabhu endawo Independiente and Racing. Eqinisweni, kwakusondele ngokwanele ukuba ahambe lapho ngebhayisekili.
Ukukhula e-Avellaneda eBuenos Aries: isithombe sobuntwana sePapu Gomez. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Yini enye? Umalume kaGomez wayeyingxenye yeqembu le-Independiente elanqoba i-Intercontinental ngo-1984 ngenkathi ubaba wakhe esebenza neklabhu. Akukho okuphikayo ukuthi ibhola lalikhona emoyeni ngeGomez encane.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngokungafani nabaningi baseArgentina, ikakhulukazi izingane zeminyaka yakhe, uGómez akazange akhule ecula izingoma zokudumisa Diego Maradona. Izithixo zakhe kwakungezase-Argentina Legends - uPablo Aimar, uJuan Román Riquelme noSebastian Verón.
Ngaphezu kwalokho, uGomez wayetshalwe imali kakhulu emakilabhini endawo, wayengumuntu othanda kakhulu i-Independiente (lapho futhi ayenenqwaba yezithixo) futhi enikela kakhulu ngomsebenzi wakhe wokwakha iklabhu yasekhaya yokufunda.
Isithombe esingajwayelekile sePapu Gomez ehleli eduze kwephampu lapho ayenomsebenzi wakhe omningi wokwakha khona ebholeni lokuncintisana. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Kufundwa kwakuyilabhu yasebusheni yabafana bakaGomez, okuyisambatho lapho athatha khona izinyathelo zakhe zokuqala ebholeni lokuncintisana, ukufunda nokwenza amakhono obuciko angakaze azi ukuthi kuzomhambisa ngaphezu kwezwekazi laseNingizimu Melika eminyakeni nje embalwa. Ngesikhathi uGomez eseneminyaka engu-14 wajoyina i-Arsenal de Sarandí futhi wakhuphuka ezinhlwini zekilabhu yase-Argentina, esiza uhlangothi lwayo lwentsha ukuba lunqobe isicoco seCopa Tandil ka-2005 ngaphambi kokwenza iqembu lakhe lokuqala ngo-2006.
Okhonjwe ngakwesobunxele, wasiza i-Arsenal yanqoba isicoco seCopa Tandil sango-2005. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
UGomez uchithe iminyaka eyi-6 ekilabhini enza unyaka wakhe omuhle kakhulu ukusebenza ngo-2007 lapho enikela ngezinhloso ezisize uhlangothi lakhe ekuzuzeni owamanqamu weCopa Sudamericana bebhekene neClub America ngemigomo ebekiwe. Imizamo elandelayo yebhola yabona ukuthi uGomez waba nokuxakaniseka okuhlaba umxhwele ngonyaka owodwa neklabhu yase-Argentina iSan Lorenzo de Almagro, intuthuko eholele uhlangothi lwase-Italy - iCatania ukuvikela izinsizakalo zakhe.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngesikhathi ngiseCatania, ifomu likaGomez laheha isasasa kumakilabhu endiza ephezulu ahlanganisa i-Athletico Madrid, Fiorentina ne-Inter Milan. Kodwa-ke, wakhetha ukudlalela iMetalist Kharviv eyaziwa kakhulu yeligi ka-Ukraine. Izizathu zokungajwayelekile kukaGomez zingahambi kahle ekutheni wayeqiniseka ukuthi uzothuthuka ngasohlangothini lwase-Ukraine futhi athole nethuba lokuba yingxenye yokubamba iqhaza kwekilabhu kwi-Champions League ezayo.
Ngokudabukisayo, obekulindelwe ngumgadli akuzange kuhlangatshezwane noMetalist Kharkiv. Ukuqala nje, i-UEFA yaqinisekisa ukuvinjelwa kukaMetalist kulolu phiko ecaphuna ukubandakanyeka kweqembu ekwenziweni komdlalo ngo-2008 njengesizathu esinamandla. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, uGomez wayengajabule ngokuthi iklabhu yayingenalo ikhwalithi nokubonakala okuhambisana nomgoqo wolimi okwamenza wazizwa elahlekile. Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi amemezele inhloso yakhe yokuphuma kwinkontileka yakhe ngokwamukela uhhafu womholo kodwa isicelo asizange samukelwe.
KwaMetalist, uPapu ompofu wayelwa konke ukuqeqeshwa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
UGomez wenqabile ukubuyela kwiMetalist ngesizini elandelayo ecaphuna isimo sezulu esinodlame nesinamandla e-Ukraine, nabadlali abaningi bakwamanye amazwe ababuyanga ngesizathu esifanayo. Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi uGomez atholwe yi-Side Atlanta yase-Italy emahoreni okugcina efasiteleni lokudlulisa ehlobo e-Italy.
Inkululeko ekugcineni: Injabulo kaPapu Gomez ibingazi mngcele ngenkathi u-Atlanta emthola kuMetalist. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukuqhubekela phambili kube nesizini enhle ka-2014/2025 yesizini ne-Atlanta futhi wazakhela igama njengomunye wabahola amagoli nabahlinzeki bezinsizakalo eziningi. Ubuye wabamba i-Atlanta kowamanqamu endaweni yesithathu emidlalweni yesizini ka-2018- 19, okuyisikhundla ebathole indawo ku-2019-20 UEFA Champions League, kanye ne-Coppa Italia Final yango-2019. Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Ukuqhubekela ku-Papu Gomez impilo yothando, ushade ngenhlonipho nentombi yakhe ephenduke unkosikazi wakhe uLinda futhi akazange azibandakanye ezimpikiswaneni zangaphambi komshado noma zangaphandle. Futhi awekho amarekhodi akhona wezintombi zikaPapu Gomez ngaphambi kokuba ahlangane noLinda.
ULinda noGomez basebudlelwaneni bomshado obujabulisayo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
ULinda akayona nje inkosikazi kaPapu Gomez kodwa ungumlandeli wakhe wokuqala kanye nowesifazane obenza umsebenzi wezandla futhi osebenza njengomakhi wezakhiwo. Lo mbhangqwana ukushada ubusiswe ngezingane ezintathu ngesikhathi sokubhala zifaka iBautista (indodana) uConstantina (indodakazi) kanye nemilo.
Isithombe esithandekayo sePapu Gomez Family- Unkakhe nezingane. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Umndeni ngaphandle kokungabaza wenza impilo yakhe nokuthanda impilo kukhanye kakhudlwana. Kulesi sigaba, sikulethela amanye amaqiniso ngamalungu omndeni kaPapu Gomez aqala nabazali bakhe.
Mayelana nobaba noPapu Gomez ubaba: Ukuqala nabazali bakaGomez, akavezi okuningi ngoyise nonina. Okuncane esikwaziyo ngabazali abasekelayo kuvela engxoxweni lapho uGomez eveza kafushane ukuthi ubaba wakhe usebenza neklabhu yasekhaya Independiente. Ubuye wavuma ukuthi umama wakhe ungomunye wabesifazane ababaluleke kakhulu kusukela esemncane kuze kube manje.
Izithombe zomkhosi kaPapu Gomez nabazali bakhe abahlale bemxhasa. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nabafowethu nezihlobo zikaPapu Gomez: UPapu Gomez unodadewabo okhonjwa njengoMonica ngenkathi kungaqiniseki ukuthi unabafowethu nodadewabo u-asides uMonica. Akusekho amanye amarekhodi wemvelaphi yomndeni kaPapu Gomez kanye nokhokho bakhe ikakhulukazi ugogo wakhe kanye nomkhulu nogogo wakhe ongumama. Omunye wabomalume bakaGomez ukhonjwe igama likaHugo kuyilapho obabekazi bakhe, abazala bakhe, umshana wakhe kanye nomshana wakhe kungaziwa ukuthi ngubani.
Isithombe esingavamile sikaPapu Gomez nodadewabo uMonica. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ngabe uyazi ukuthi i-Papu Gomez ayidingi ukuba sezindabeni ukuze ifinyelele enkantolo kahle? Ubuntu bakhe be-off-pitch - obuchazwa kakhulu uphawu luka-Aquarius Zodiac - buhlala bumfaka kulelilight.
Ungumuntu opholile, oyingqayizivele, ogxile esenzweni, oqotho futhi akuvamile ukuthi aveze amaqiniso ngempilo yakhe yangasese neyomuntu siqu. Izintshisekelo zikaGomez nezinto azithandayo zibandakanya ukubuka ama-movie, ukubhukuda, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukudlala ithenisi, ukupheka nokuchitha isikhathi sekhwalithi nomndeni wakhe nabangane.
Umgcini webhola akadingi ukusho ukuthi mkhulu ekuphekeni. Izitsha ziyamkhulumela. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Ukhuluma ngendlela uPapu Gomez enza ngayo futhi asebenzise ngayo imali yakhe okulinganiselwa ukuthi inani lomgadli elikhulayo likhula ngamanani emiholo ayithola ngokudlala ibhola lezindiza eziphezulu ngenkathi ihlaziya izindlela zakhe zokusebenzisa imali eveza ukuthi uphila impilo kanokusho.
Ubufakazi bendlela yokuphila enjalo bufaka ikhono lakhe lokugibela izitshudeni eziyimfihlo zokuhambela izindawo zokuvakasha zikanokusho. Ngaphezu kwalokho, umgadli unezimoto ezibizayo ezipake emagaraji amahle endlu yakhe nasezindlini.
Ubufakazi bokuphila okuhle: Nansi iPapu ehamba eduze kwenye yezimoto zayo zikanokusho. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso wePapu Gomez Ubuntwana Kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukugoqa indaba yethu yobuntwana yePapu Gomez kanye ne-biography, sethula amaqiniso amancane noma angajwayelekile mayelana nobungoti bebhola.
Ukubhema nokuphuza: Yize kungabonakali ukuthi uGomez ubhema, uyaphuza kanti futhi wake wabonwa ethokozela ijeke likabhiya nonkosikazi wakhe uLinda. Ngaphandle kwalokho, kuqinisekile ukuthi owedlule uphuza ngokuzibophezela ukuvikela impilo yakhe nokuvikela izikhathi zokuhlekisa emphakathini.
Ukuphuza ngokuziphendulela: Yena nonkosikazi wakhe bathanda ukujabulela izimbiza zikabhiya. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Inkolo: Awekho amarekhodi wePapu Gomez avezayo ngenkolo yakhe. Kodwa-ke, ukungahambisani kahle kumvumela kakhulu ukuba abe ngumKristu njengoba kubonakala egameni lendodana yakhe uBautista nendodakazi yakhe uConstantina. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukuthi abazali bakaPapu Gomez bamkhulisa njengomKristu.
Ama-tattoos: U-Gomez uhla phakathi kwamaqembu athile azelwe e-Argentina azalwa ngobukhulu kuma-tattoos. Okudluliselwe kunemidwebo yobuciko enemibala engalweni yakhe, esifubeni, emilenzeni inesikhala esanele sokungeza ubuciko obuningi ngeminyaka.
Isithombe esihle esibonisa izingxenye ze-Papu Gomez's tattoos. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana nesidlaliso sakhe: Uyazi ukuthi igama lesidlaliso likaGomez elithi “El Papu” linokuthile ekuphakamiseni kwakhe okuphakeme okungamamitha ayi-5. Isidlaliso okukholakala ukuthi sinikezwe umama wakhe phambili sivela kwa “Papuchi” okusho ukuthi “isiqu esifushane”.
Ama-Armbands: U-Asides ekubeni yingcweti yebhola uPapu Gomez udume ngesitayela sakhe kanye nemvelaphi yakhe sibonga unkosikazi wakhe omenzela ukaputeni omuhle umpetha. Ama-armband akhokha inkokhiso yama-greats ebhola noma akhumbule izikhathi ezikhethekile ebholeni kanye nasempilweni yomndeni kaGomez.
Ambalwa amaqoqo ezinye izibalo ezigqokwa ngumgcini webhola omkhulu. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Papu Gomez Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane ngakho ngathi ukuphawula ngezansi. Sizohlala sithokozela futhi sihlonipha imibono yakho.